Ronaldo Luis Nazario de Lima Hooyo Hore Dabiiciga ah Qormooyinka Lahaanshaha
Home CLASSIC FOOTBALLER Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee Legend-ka kubbadda cagta sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; 'Fenomeno'. Our Ronaldo Luis Nazario de Lima Carruur Dabeecadda iyo Wacdiyadiisa Xaqiiqada ah Waxeey kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ka mid ah dhacdooyinka la arki karo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Kaga bilow.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Nolosha Carruurnimada Hore
Ronaldo Luis Nazario de Lima Photo Childhood Photo
Ronaldo Luis Nazario de Lima ayaa ku dhashay 18th ee September 1976 ee Rio de Janeiro, Brazil, aabihiis, Nelio Nazario de Lima, Snr iyo hooyada, Sonia dos Santos Barata. Wuxuu ahaa cunuggii saddexaad ee labada lamaane.
Ronaldo Luis Nazario de Lima ayaa ka yimid qoys sabool ah oo ku dhibtooday inuu u diro dugsiga. Waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay sheyga ilmaha ee sannadaha sii kordhaya inta badan qeybaha tacliinta. Horumarka iyo waxqabadka wanaagsan ee dugsiga wuxuu gaaray heerkiisii ​​ugu dambeeyay ilaa da'da 11 markii ay lama-filaantu dhacday. Waalidiintiisa, Nélio Nazário de Lima iyo Sônia dos Santos Barata, ayaa kala tagay oo waxay tageen siyaabo kala duwan markii uu ahaa 11 oo keliya. Inkastoo uusan jirin cid ka caawisa isaga, Ronaldo Luis Nazario de Lima waa inuu ka tago dugsiga. Waqtigaas, habka keliya ee lagu kasbado lacag yar ayaa ah inay ciyaaraan tartamada kubbadda cagta. Wuxuu helay jaceyl kubadda cagta ah ee raadinta si uu u noolaado.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Xiriirka iyo Nolosha Qoyska
Ronaldo xiriirka Luis Nazario de Lima ayaa ku soo biiray dadweynaha sanadka ee 1997 markii uu la kulmay qaabka reer Brazil iyo actresska Susana Werner kaas oo uu ka jeclaa fanaani caan ah oo reer Brazil ah oo loo yaqaan 'Malhacao'.
Ronaldo xiriirka uu la leeyahay Susana Werner
Codsigiisa in lagu soo bandhigo sadex dhacdo ayaa la ansixiyay. Labaduba way jecel yihiin marka ay kulmaan. Tani waxay keentay xiriir dheer oo muddo dheer socday ilaa bilowgii 1999.
Dhammaadka xiriirka hal-abuurka ah ayaa ah bilawga qof kale oo weeraryahan ah oo isku arkay inuu yahay kan ugu sareeya ragga ragga ah ee doonaya liiska. Sannadkii hore, Ronaldo ayaa jacayl u muujiyay ciyaaryahankii hore ee reer Brazil Milene Domingues.
Ronaldo xiriirka Milene Domingues
Wakhti ma qaadin ka hor inta aysan uur yeelin. Markii ay arkeen inay uur yeelatay, Ronaldo ayaa iyadana bedelay. Labadooduba waxay guursadeen bishii Abriil, 1999. 6th Abriil 1999, Milene waxay dhashay wiilkiisii ​​koowaad, Ronald oo ku dhashay Milan.
Ronaldo iyo Milene, waxay soo dhaweynayaan ilmahooda
Xaaskooda waxay sii wateen sanadihii 4 kadib markii ay kala sooceen.
2005, Ronaldo ayaa ku biiray qaab ciyaareedka reer Brazil iyo MTV Star Danial Cicarelli oo uur leh oo uur leh, laakiin waxaa la siiyay dhicis.
Ronaldo iyo Daniela
Xiriirkoodu wuxuu ahaa ugu gaaban. Waxay socotay seddex bilood oo keliya ka dib xafladdii arooska ee raaxada ah oo ku baxda £ 700,000.
Isla sanadkaas 2005, Ronaldo ayaa sameeyay a baadhitaanka aabbanimada waxaana uu xaqiijiyay inuu yahay aabaha wiil magaciisu la yidhaahdo Alexander.
Ronaldo iyo Alexandra
Wiilkan ayaa dhashay kadib markii uu xiriir hoose la yeeshay Ronaldo iyo Michele Umezu, oo ah garsoore reer Brazil ah oo Ronaldo ku hor yimid Tokyo, 2002.
Ronaldo iyo Michele
Jahawareer: Bishii Abriil 2008, Ronaldo ayaa ku lug lahaa fadeexad seddex ah transvestite dhilleysi uu kula kulmay meel lagu caweeyo oo ku taal magaalada Rio de Janeiro. Kadib markii ay ogaadeen in ay sharci ahaan u maleeynayeen, Ronaldo wuxuu u bixiyey $ 600 inuu baxo. Mid ka mid ah saddexdaas, oo hadda geeriyooday Andréia Albertini ayaa dalbaday $ 30,000. Wuxuu mar dambe soo bandhigay kiiska warbaahinta. Guurkiisa Maria Beatriz ayaa la joojiyay isla markiiba ka dib fadeexad. Kadib sharaxaad badan oo ku saabsan arrinka, xiriirka ay dib u bilaabeen. Waqtigaan, jacaylku wuu wada baabbi'iyey.
Ronaldo iyo Maria
Wuxuu la baxaa iyada si cad oo dhan dunida oo dhan si ay u ogaato inuu sii baadhi doono.
Ronaldo iyo Maria (Jacaylkiisa noloshiisa)
24th December 2008, Maria Beatriz Antony waxay dhashay gabadoodii koowaad, Maria Sophia, Rio de Janeiro.
Bishii Abriil 2009, qoyska oo dhan waxay u guureen si cusub Penthouse gudaha São Paulo. On 6 April 2010, Maria Beatriz Antony waxay dhashay gabadoodii labaad, Maria Alice ee São Paulo. Si kastaba ha ahaatee, Maria Alice ayaa isla dhashay isla maalintaas, 10 sano kadib markii walaalkeed Ronald uu dhashay.
Ka dib markii la xaqiijiyay cunugiisii ​​afraad, Ronaldo wuxuu ku sheegay 6 December 2010 inuu lahaa a xajinimo, si loo "xiro warshadda", oo dareensan in haysashada afar caruur ah ay ku filan tahay.
Ronaldo Nazario de Lima iyo Family
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Xiriir la leh Wiilka Hore, Ronald.
Waxay ka fiican yihiin asxaabta. Ma jiraan wax shaki ah oo ku saabsan maskaxda. Ma jiro wax xiriir ah oo ka dhexeeya Ronaldo (aabaha) iyo Ronald (Son).
Sida Aabe sida Wiilka - Ronaldo iyo Ronald
Ronald wax badan ayuu ka helaa aabihiis, gaar ahaan qaabka loo bixiyo, kobcinta iyo hanuuninta.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Hore Bilaabista Kubadda Cagta
Ronaldo bilowgii hore ee kubada cagta
Dhamaan bilihii 6 ka dib markii uu kubada cagta qabtay, Ronaldo Luis Nazario de Lima wuxuu noqday xubin joogto ah oo dhamaan ciyaaro kubadda cagta ah oo lagu abaabulay degaankiisa. Waxa uu taageero buuxda ka helay saaxiibbadiis iyo deriskiisa oo ogaa balanqaadkiisa, waxana uu doonayay inuu si dhakhso ah u horumariyo. Horraantii bilowgii kubadda cagta ayaa ka bilowday waddooyinka Bento Ribeiro, oo ah agagaarka Rio De Janeiro. Waxay sidoo kale ahayd meel uu si qurux badan u kiciyo kubada kubada cagta adduunka.
Ronaldo ayaa isticmaalay dhamaan fursadaha la siiyay si uu u muujiyo xirfadiisa wadada ku dhisan ee kacaanka. Halyeygii hore ee kooxda reer Brazil Jairzinho ayaa ku guuleystay abaalmarinta tababaraha kubadda cagta. Marka uu arko kartida uu leeyahay, Jairzino ayaa kugula taliyay 16 sanadi hore kooxda Cruzeiro.
Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay ee kooxda, Ronaldo ayaa jabiyay rikoorka isagoo dhaliyay gool cajiib ah 44 ciyaaraha 44. Dardargelinta xaraashka, dheelitirka jirka ee awoodda badan iyo xakameyn dhow oo farsamo iyo farsamo ayaa ku dhajiyay dhammaan isboortiga kubadda cagta iyo taageerayaasha. Hawlgalkii uu sii waday wuxuu kooxda ka caawiyey inay ku guuleystaan ​​horyaalkoodii ugu horeeyay ee Brazil ee koobka 1993. Waqtiga qaarkood, qof kasta ayaa bilaabay inuu ku magacaabo 'New Pele ' taas oo u mahadcelisey qaab ciyaareedkiisa kubada cagta ee u muuqda inuu ka mid yahay Pele markii uu bilaabay da'da isku midka ah ee 1958. Waqti yar ayay qaadatay ka hor inta uusan Ronaldo helin aqoonsi weyn oo qaran isagoo ku jira da'da qandaraaska ee 17.
Moreso, waxqabadkiisii ​​wuxuu siiyay tikitirin toos ah oo loogu talagalay koobka adduunka 1994 kaasoo lagu qabtay dalka Mareykanka. Inkastoo uu daawanayay tartanka kursiga keydka, ciyaartoydiisa ayaa ku guuleystay koobka.
Xiddiga ugu qaalisan Cristiano Ronaldo ayaa ku faafay qaarada yurub markii uu ku guuleystay koobkii adduunka ee 1994 Koobka Adduunka, waxaana ugu danbeyntii ku guuleystay Piet De Visser, isagoo ka mid ah xiddigihii ugu fiicnaa kubada cagta markii uu hore u soo bandhigay Ronaldo Vicente Romário.
Horyaalka heerka caalami wuxuu ku guuleystay inuu u wareego PSV Eindhoven ka dib Koobkii Adduunka.
Ronaldo ayaa aqbalay sababtoo ah waa dhaqan u ah ciyaartoyda ka soo jeeda Brazil waxay u egtahay in ay aadaan Holland ama France si ay u bartaan ciyaaraha yurub ka hor intaanay dhaqaaqin. Ronaldo ayaa ku dhuftay wadada markii uu qandaraaska loo gaday PSV Eindhoven oo ku yaala Netherlands, 1994, oo udhaxeysa goolal udhaxeysa tartamada Yurub.
Waxa uu labo xilli ciyaareed ku qaatay PSV Eindhoven isagoo dhaliyay goolasha 54 ciyaaraha 57.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Sanadka 1996 ee la xasuusto
Waxay ahayd xagaaga 1996. Hal sano oo ah waxyaabo badan oo dhacay. Sanadkiiba Michael Michaelson ayaa ku guuleystay bilada dahabka Atlanta Olympics. Hal sano oo England ah ayaa martigelisay islamarkaana ku dhowaadey gaari final ah tartanka European Championships. Sannad shantii xidhmood ee dhibaatada loo yaqaan 'Spice Girls Girls' ayaa la naqshadeeyay waxa ay doonayaan, waxa ay dhab ahaantii rabeen. Sanadkiiba hal Hotmail ayaa la soo saaray. Sanad Fogees ayaa noo jilicsanaa heesahaan. Sanadkan Nelson Mandela waxa uu sii waday inuu noqdo ra'iisal wasaaraha koonfur Afrika. Sano sanno ah Prince Charles iyo Princess Diana ayaa wada saxiixay waraaqaha furitaanka.
waxa ay aheyd sannadkii magaca Ronaldo Luis Nazario de Lima uu noqday magaca qoys ee dareenka caalamka. Tani waxay aheyd sannadkii Barcelona ay soo saartay caruusadda 19-da (Luis Luis Nazario de Lima) oo ka yimid PSV Eindhoven kaasoo goolal u dhalin lahaa goolasha.
Waxay ahayd waqtigaan Sir Bobby Robson iyo Jose Mourinho wuxuu la shaqeeyay Ronaldo sida macalinka Barcelona iyo kaaliyaha tababaraha.
Ronaldo ayaa kaliya sii joogi doona Barcelona kaliya hal xilli ciyaareed, laakiin waxa uu saameyn ku yeeshay waqtiga uu la joogo kooxda.
Ronaldo wuxuu kooxda u horseedayaa koobka UEFA Cup Winners Cup iyo Copa del Rey.
Wuu ku sii joogi doonaa Barcelona kaliya hal xilli ciyaareed, laakiin waxa uu saameyn ku yeeshay waqtiga uu la joogo kooxda. Wuxuu dhaliyay goolal 47 ciyaaraha 49 waxaana sidoo kale noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee abid ku guuleysta abaalmarinta xiddiga aduunka ee FIFA sanadkaan.
Sanadihii 20, Ronaldo waxa uu soo bandhigay heer caalami ah oo aan waligiis arag.
In uu erayada ... "Waxaan jeclahay inaan goolal dhaliyo ka dib markii aan daafacyada iyo goolhayaha u gudbiyay. Tani ma ahan qibradeyda, laakiin caqligayga. " - Ronaldo.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Inter Milan Call
Lacag ayaa bilaabatay in ay ka hadlaan kubadda cagta sanadka 1998. Sanadkaas, Barcelona ayaa aqbashay rikoorkii rikoorka adduunka ee adduun lacageed oo dhan £ 18 ay kaga soo iibsatay Inter Milan.
Marnaba cidna kama hadlin tartanka, Ronaldo ayaa u dhaqaaqay kooxda Talyaaniga. Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay waxa uu ahaa mid ka mid ah waxa adduunka ka yimid inay ka filanayaan xiddiga xiddiga - 34 goolal badan oo la raacay, iyo diiwaano badan ayaa jabay.
Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ku guuleysta abaalmarinta FIFA World Player of the Year award, halka sidoo kale uu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Finalka 1998 Koobka Aduunka
Intii uu socday koobka adduunka, mid ka mid ah ciyaartoyda 1998 ee u dhexeeya Brazil iyo France ma aysan soo gudbin warqad fiican. Iyadoo Brazil ay dooneysay inay difaacdo taajka ay ku guuleysteen 1994, France ayaa ku ciyaareysay gurigooda, iyagoo doonaya inay ku guuleystaan ​​koobka dahabka markii ugu horeysay. Ciyaartu sidoo kale waxay arkeen labo halyeey oo midba midka kale isha ku haya, Zinedine Zidane ayaa hoos u dhigay Ronaldo-kii Ronaldo, kaasoo naftiisa ku jiray muran fantastik ah oo ka tagay dhamaan taageerayaashiisa.
Tixgeli-Ronaldo, wiilka dahabiga ah ee Brazil, oo la filayay inuu hogaamiyo kooxda ka horeysa France ayaa xanuunsaday saacado ka hor ciyaarta.
Wargeysyadan ayaa si dhakhso ah u sameeyay sheekooyin cusub oo sheegaya in weeraryahanka uu la dhibtooday calool xanuun. Maqaal dheeraad ah ayaa la furay, oo ka soo jeeda cuntada sumeeyda dhibaatooyinka shakhsiyeed ee noloshiisa jacaylka. Ugu dambeyntiina, xaqiiqda dhabta ah ayaa sidoo kale waxaa shaaca ka qaaday dhakhtar ka tirsan xulka Brazil Lidio Toledo: Ronaldo ayaa loo qaaday isbitaalka si uu u seexdo habeenkii ka hor dhamaadka ciyaarta.
Waxaa laga saaray ciyaartii ugu horeysay ee kooxda ku soo laabatay oo kaliya si ay u soo celiso daqiiqado ka hor inta aysan ciyaarta bilaabin.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jirey khaanad kale. Ronaldo halkii uu ku guuleysan lahaa Koobka Aduunka ee Koobka Adduunka, Ronaldo ayaa awoodi waayay inuu ruxo xanuunkiisa, waxaana uu hoosta ka xariiqay Zinedine Zidane inuu labo gool ka dhaliyo France oo ku guuleystay Koobka 3-0 ee Brazil.
"Waxaan lumiyay koobka adduunka, laakiin waxaan ku guuleystay koob kale - nolosheyda" - Ronaldo (ku saabsan Koobka Koobka Adduunka ee 1998)
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Sheekada Dhaawaca
Ciyaartoy badan oo suurtagal ah ayaa ah inay dhaawacyo halis ah qabaan. Michael Owen, oo ahaa qofkii ka cabsanayey kubada cagta, ayaa soo wajahay dhaawacyo isku mid ah sida Ronaldo oo uusan ku laaban karin qeybtii uu ka ahaa ciyaaryahankii hore. Paul Gascoigne, qoryaha Tiger, Joe Cole, Gary Neville iyo ciyaaryahano kale oo badan oo ka mid ah ciyaartoyda ayaa dhaawacyo soo gaaray, mana ku soo laaban karaan qaab ciyaareedkooda ugu fiican.
Waxaa jira khad khafiif ah oo kala soocaya kuwa weyn, laga bilaabo inta kale. Xaqiiqdii waa shaqo adag oo aad ugu wanaagsan tahay. Maxaa ka sii adag? Si aad u noqotid kuwa ugu wanaagsan, dayrta, waa la qoraa, ka dibna wuxuu noqdaa kan ugu fiican. Tani waa Ronaldo Luis Nazario de Lima sheekada dhaawaca.
1998 WORLD CUP INJURY AND COMEBACK- Waxa uu ku dhaawacmay shil gaari oo lala galay goolhayaha Faransiiska, Barthez oo ka tirsan koobka adduunka 1998.
Mar labaad wuxuu ka aargoosanayay Barthez, kaasoo ku dhaawacmay finalkii Koobka Adduunka ee 98, iyadoo seddexleey uu dhaliyay seddexleey Manchester United, taasoo ka dhigtay inuu si fiican uga dhex muuqdo Old Trafford.
1999 / 2000 INJURY AND COMEBACK- Bishii Nofeembar 21st 1999, masiibo ayaa mar kale ku dhufatay, iyadoo Ronaldo uu jabiyay jilibka intii uu ciyaarayay kulankii Serie A ee Lecce.
Ka dib qaliinka iyo bilihii 5 ee dhaqan celinta, ciyaaryahanka reer Brazil ayaa ku soo laabtay finalkii Coppa Italia ee ka horyimid Lazio, lakiin rajo kasta oo soo laabasho ah ayaa la jabiyay ka dib markii uu dhaawac jilibka ah soo gaaray, . Wuxuu ahaa nin xagjir ah.
Ma ciyaari doono mar kale ilaa dhamaadka 2001 / 2002 xilli ciyaareedka. Marka la eego, waxa uu maqnaa muddo sannad ah. Kaliya wuxuu u muuqday lix iyo toban kulan, waxaana uu kubad ka helay 7 kaliya Inter xilli ciyaareedkan.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Inter Milan ka dib
Ka dib markii uu soo kabsaday, Ronaldo ayaa sameeyay dadaal ku filan oo uu ku dhaadhiciyo tababaraha Brazil Luiz Felipe Scolari inuu ku soo daro xulkiisa Koobka Adduunka ee 2002 ee Japan / Korea. Isagoo dib u casriyeynaya cayaartiisa si uu u bedelo xajistiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa, Ronaldo ayaa ahaa ciyaaryahan ka duwan waqtiga uu dhaawac ka soo gaaray. Waxa uu ku tiirsanaa awood badan iyo isha lagu hagaajiyay goolka. Tani waxa uu soo martay khibrad. Waxa uu soo bandhigay qaab ciyaareedkiisa cusub ee ciyaarta si uu saameyn xun u yeesho - wuxuu u hoggaansamaa Brazil finalka mar kale iyo soo bandhigista Germany. Dhamaan wadahadalka cayaaraha ee horey u soo xushay Ronaldo wuxuu ka adkaaday jinniyo ka soo jeeda 1998 - oo ka adkaadaa wuxuu sameeyay.
Xiddiga reer Brazil ayaa qaab ciyaareedkiisa cusub ku soo bandhigay Koobka Adduunka 2002 inuu saameyn xun ku yeesho halka uu Brazil ku hogaamiyay Koobka Adduunka ee Koobka Adduunka isla markaana wuxuu dhaliyay goolal 2. Wuxuu dhaliyay goolal 8 tartanka oo uu ku guuleystay MVP. Waxa uu sidoo kale ku guuleystay ciyaaryahanka adduunka ee Fifa, Laureus ayaana abaalmarintan ku soo laabtay sannadkaas.
Horumarka uu sameeyay waxa uu ku guuleystay abaalmarin kale oo adduun lacageed oo caalami ah, waqtigaan € 39, madaama Real Madrid ay ku darsatay line-upkooda ciyaareed ee Galacticos. Inkastoo uu ka maqan yahay ilaa bartamihii bishii October, taageerayaasha Real Madrid ayaa soo dhaweeyay Ronaldo iyadoo soo dhaweyneysa halyeeyada - isaga oo ku dhawaaqaya magaciisa marka uusan ciyaarin oo jabin rikoorkii iibka ganacsiga. Isagoo sameynaya waxa uu mar walba ku fiicnaa, Ronaldo ayaa uga mahad celiyay taageerayaasha 2 kulankiisii ​​ugu horeeyay. Waxa uu sii waday inuu ku biiro goolalaha XNUM ee ku wajahan sidii uu ugu guuleysan lahaa La Liga Madrid.
Inkastoo uu dhaawac jilibka ah, Ronaldo ayaa doonaya inuu goolal ka dhaliyo 104 kulamada 184 ee Madrid xilli ciyaareedkii 5 ee kooxda.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Taariikhda Madrid Era (Dhibaato Dhibaato iyo Soo laabasho)
Ronado ayaa ku dhacay liiska tababaraha Real Madrid Fabio Capello ee 2006, ka dib markii uu saxiixay Ruud van Nistelrooy oo ka yimid Manchester United, maalmaha uu ku sugnaa Bernabeu ayaa la tiriyay.
Janaayo 27th 2007, Ronaldo ayaa u saxiixay AC Milan heshiis qiimihiisu yahay € 7.5.
Bishii Febraayo 13th 2008, kulamadii horyaalka ee Livorno, Ronaldo ayaa garoonka ku soo booday ka dib markii uu soo gaaray dhaawac jilibka ah ka dib markii uu isku dayay inuu ku guuleysto kubada.
Waxa ay aheyd markii seddexaad ee Ronaldo uu dhaawac ka soo gaaray, islamarkaana xitaa xiddiga caanka ah ee Milan Fitness labadiisu rajo weyn ka qabay inuu soo kabsado - Milan ma aysan cusbooneysiin qandaraaskiisa dhamaadka xilli ciyaareedkaan inkastoo uu goolal ka dhaliyay 8 ciyaaraha 20.
Sida laga soo xigtay Ronaldo, "Noloshaydu had iyo jeer waxay ahayd caqabado taxane ah, waxaana naftayda nafsiyan u diyaarsanahay, laakiin tani waa caqabadda ugu wayn ee noloshayda." - Ronaldo
Xilli ciyaareedkii hore, Ronaldo ayaa wacad ku maray inuu cadeeyo inuu yahay qof walba oo qalad ah, islamarkaana uu ka soo laabto dhaawacii uu ku soo gaaray tababarka saddexaad. Markuu ku laabto dhulkiisii ​​hooyo wuxuu arkey calaamada caanka ah ee Corinthians, halkaasoo uu ku soo dhaweeyay halyeeyadii soo dhaweynayay.
Inkastoo uu baaqi ku sii ahaanayo bilaha 13, Ronaldo ayaa ka caawiyay inuu goolal ka dhaliyo 30 kulankiisii ​​55, isagoo kooxdiisa ka caawiyay inay horyaalka iyo koob double. Waxaa sidoo kale soo yeeray wicitaanno cusbooneysiiyay isaga oo dib loogu soo celiyay xulka Brazil mar kale koobka adduunka ee 2010. Tani ma aysan dhex marin.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Maareynta koobka adduunka ee ugu dambeeyay
Ronaldo ayaa ciyaaray koobka adduunka 2006 inkastoo shaki la gelinayo jirkiisa iyo culeyskiisa. Waxa uu ku dhameysatay jabkii rikoorka Gerd Muller, waxaana uu noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda koobka Adduunka isagoo leh 15.
Waxa uu gaaray kaliya hal gool, isagoo dhaliyay goolkii uu ka dhaliyay Ghana bishii June 27th, isagoo goolka 15th ku dhaliyay Koobka Adduunka. Brazil ayaa dooneysa in ay iska fasaxdo Faransiiska wareega quarter-finalka.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Wax ka qabashada Dhibaatooyinka Miisaanka
Ronaldo, ayaa ku dhibtooday inuu helo miisaan aad u badan qeybtii danbe ee xirfadiisa ciyaareed.
Baaritaan caafimaad ayaa shaaca ka qaaday inuu qabo cudurka hypothyroidism - cudur uu saameynayo dheef-shiid kiimikaad.
Sida laga soo xigtay Ronaldo, "Baaritaan caafimaad, waxaan ogaadey inaan ka cabanayey cabasho la yiraahdo hypothyroidism, taas oo hoos u dhigta dheef-shiid kiimikaad, iyo inaad xakameyso waxaan qaadan lahaa hormoono aan la ogoleyn kubadda cagta sababtoo ah anti-doping (xeerarka). Waxaan ka baqayaa in xirfaddaydu ay ku dhowdahay dhammaadkeeda. "
Ronaldo ayaa sidoo kale u balan qaaday taageerayaasha inuu ku sii dagaalamayo miisaankiisa. Adiga, Weligiis ma siin wax dammaanad ah. Waqtiga qaarkood, qof walba ayaa helay in rajada oo dhan luntay ka dib markii wax badan la halgamay.
Marna waligiis ma uusan shaqeynin si uu mar labaad u qaabeeyo.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -U faahfaahin hawlgabkiisa
Ronaldo ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha kubada cagta markii Isniintii lagu dhawaaqay shir jaraa'id oo shucuur ah, taasoo keentay inuu dhammeeyo xirfadiisa ciyaareed ee 18. Ronaldo ayaa ugu danbeyn ku dhawaaqay inuu ka fariisanayo kubada cagta bisha February.
Sida laga soo xigtay Ronaldo- "Xirfaddaydu waxay ahayd qurux iyo cajiib ah. Waxaan badiyay guulo badan laakiin guulo aan dhamaad lahayn. Aad bay u adag tahay in aan ka tago wax iga farxiya. Si tartiib ah, waxaan rabay inaan sii wado, laakiin waa inaan qiraa in aan lumay dagaalka jidhkayga. "
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Dunida aan cadaalad ahayn (Isbarbardhiga Cristiano Ronaldo)
Waxyaabaha ugu horeeya ee maskaxdeena yimaada marka qof uu ku magacaabo Ronaldo waa Cristiano Ronaldo, Cr7, Cr9. Luis Nazario De Lima Ronaldo waxaa badanaa loo yaqaanaa, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo iyo Cristiano Ronaldo.
Taageerayaal badan oo Ronaldo ah oo Lima ah ayaa si dhab ah u dareemaya murugo marka qof weyn sida isaga laftiisa loo yareeyo heerarka hooseeya oo aan la xasuustin waxa uu ku guuleystay, laakiin sida uu u miisaamayo ama timaha. Tani waa mid ka mid ah sababaha uu LifeBogger go'aansaday in uu waqti u qaato oo uu wax ka qoro ciyaaryahan taas oo ah macquul ugu weyn kubadda cagta.
Haatan waxaan ku weydiineynaa, miyaad xusuusnaan doontaa Ronaldo miiskiisa, ama heerka uu goolal ku dhalin lahaa? Miyaad xusuusan doontaa wixii uu ku sameeyay timihiisa ama waxa uu ku qaban karo cagihiisa?
Marka xigta qof ayaa yiraahdo Ronaldo, miyaad ka fikireysaa ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer Portugal kaasoo ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka sannadka adduunka ee FIFA ama ciyaaryahanka reer Brazil oo seddex jeer ku guuleystay? "Ku dheji faalladaada hoose halkan ka dib markaan akhriyo maqaalkan".
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta -Lifebogger Rankings
Isaga oo la qorey seddex jeer horey mar hore xirfaddiisa, waxaad hadda ogtahay inuu ku raaxaysto inuu caddeeyo shakiyihiisa khaldan. Ronaldo, waxaan heysanaa ciyaaryahan kaasoo lagu khasbay in uu si buuxda dib ugu dhisto cayaartiisa seddex jeer oo uu ku dhaawacmay wadarta guud ee ka badan bilaha 36. Tani waa waxa aan ka fekereyno isaga oo ku jira qiimeynteena hoose.
Buugga xusuus-qorka ee PSV Eindhoven
Iphone 5C Refurbished Iphone XNUMXC Mee 23, 2018 At 9: 13 am
Habka aad u sheegayso wax kasta oo ku jira qoraalkan waa mid dhab ah, dhamaantoodna awood u leh
oo si sahlan uga warqabaan, way mahadsan tahay.
David Araniva Juun 24, 2018 At 8: 49 am
Taasi waa mid fantastik ah. Waan ku faraxsanahay akhrinta sheekadaada. Ronaldo weli waa nin weyn. Waad ku mahadsan tahay sheekadiisa.
Yh nabil Oktoobar 5, 2018 10: 50 pm
Cr9 wuxuu ahaa mid aad u weyn oo kubbada cagta ah